Tsipy kanetibe – «National de Millau»: resy teo amin’ny famaranana ry Toutoune | NewsMada
Tsipy kanetibe – «National de Millau»: resy teo amin’ny famaranana ry Toutoune
Par Webmaster Two sur 14/08/2018
Lavo teo amin’ny famaranana, niadiana ny «National de Milau», taranja tsipy kanetibe, ny Malagasy. Tsy nampitsanga-menatra anefa ny vokatra azon’izy ireo satria betsaka ireo kalaza resin-dry zalahy.
Tsy mbola afa-bela tamin’i Robineau aloha, hatreto, ny Malagasy, eo amin’ny tsipy kanetibe. Voaporofo indray izany, ny asabotsy lasa teo, nandritra ny fiadiana ny andiany fahatelo amin’ny « Festival international de Pétanque evenèment de Millau » (Fipem). Resin’i Robineau sy i Stéphane Durand ary i Bruno Gire, teo amin’ny famaranana, mantsy i Toutoune sy i Hery (Radoko) ary i Mamy Patrick. Niondrika, tamin’ny isa 13 no ho 4, izy telo mirahalahy. Niady sy nifanakaiky ny lalao na nitarika tamin’ny isa, 9 no ho 4, aza ry Robineau. Lesoka teo amin’ny Malagasy ny tifitra indroa tsy voan-dRadoko ka nanome vahana ireo Frantsay. Nanaovan’i Bruno Gire, “carreaux” indroa mantsy izany avy eo ka nampalalaka ny lalan’i Robineau, teo amin’ny fanampiana isa ho 13.
Na teo aza ity faharesena ity, tsy nitsanga-menatra ny Malagasy satria nandavo ny ekipan’i Dylan Roche sy ny rainy niaraka tamin’i Fabio Zeni, tamin’ny isa 13 no ho 8. Izy telo mirahalahy mianaka izay nahazo ity “National de Millau” ity, tamin’ny taon-dasa. Efa nandrombaka izany koa i Mamy Patrick, tamin’ny taona 2016.
Adin’ny samy ekipa malagasy
Nomontsanin-dry Toutoune, tamin’ny isa mavesatra 13 no ho 2, teo amin’ny lalao ampahefa-dalana, kosa ny ekipa malagasy nisy an-dRahaingoson Aina Herman sy Andrianirainy Maminirina ary i Guillaume Fernandez.
Nahatratra ekipa olon-telo miaraka lehilahy miisa 289 ny nandray anjara tamin’ity andiany fahatelo amin’ny “National de Millau” ity.
Mbola sakana ho an’ny Malagasy izany i Robineau satria ny ekipany no manakana ny lalan’ny Malagasy, any amin’ny fiadiana ny “Masters 2018”, izay hiditra amin’ny dingana fahenina, ny 22 sy ny 23 aogositra ho avy izao. Fihaonana hotanterahina ao Limoux.
Raha tsiahivina, laharana faharoa ny Malagasy, manana isa 24, taorian’ireo dingana dimy efa tontosa. Mbola mitarika ny ekipan’i Sarrio, manana isa 34. Fahatelo, ry Montoro, isa 22. Isa iray monja ny manelanelana azy ireo, amin’i Robineau. Fahadimy, ny Frantsa mahazo isa 21. Eo amin’ny laharana fahenina kosa i Loy, isa 17 ary farany ny Internationale, tsy nahazo afa-tsy isa 16.